Dr Raveloson Jean-Aimé “Tsy miteraka demokrasia ho azy ny fifidianana” | NewsMada
Dr Raveloson Jean-Aimé “Tsy miteraka demokrasia ho azy ny fifidianana”
“Fifidianana irery, tsy miteraka fampandrosoana. Ny fifidianana, tsy miteraka demokrasia ho azy amin’izao. Misy fifidianana heverina ho demokratika, nefa tsy demokratika. Tsy demokratika akory ny tany rehetra izay manao fifidianana.”
“Raha ny fijerin’ny FES azy: eo an-tokonam-baravaran’ny demokrasia isika”, hoy izy.